SD oo kalsooni kala noqosho ku oogay Stefan Löfven - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
SD:Baarlamaanka kalsoonida ha kala noqdo Löfven
La daabacay onsdag 13 september 2017 kl 13.35
Mooshinkaan ayaa la xiriira sida xukuumaddu u maaraysay fadeexadii IT-ga ee heyadda hoggaanka gaadiidka. Mar aan sidaas u fogeyn ayay Paula Bieler oo ah xil-dhibaanad golaha baarlamaanka u fadhida xisbiga SD sheegtay in mooshinkaan ay gudbin doonto isla maanta marka uu soo dhamaado dood baarlamaanku ka leeyahay carruurta qaxootiga ah ee kelinimada dalka ku timid.
Ugu yaraan 35 xildhibaan ayaa loo baahan yahay si mooshin noocaas ah loogu gudbiyo baarlamaanka. Xisbiga SD xil-dhibaanada uu ku leeyahay baarlamaanka Sweden waxa ay gaarayaan 47 xil-dhibaan.
Mooshinkan ayaa ka dib marka labo goor la soo hordhigo kala-fahdiga baarlamaanka oo laga dooda la cod gelin doonaa. Sida la saadaalinayo baarlamaanka waxa uu mooshinka cod u qaadi doonaa ugu horeyn maalinta jimcaha. Si mooshinku u meel-maro waxaa loo baahan yahay ugu yaraan 175 xil-dhibaan oo cod ku taageera.
Sverigedemokraterna horey waxa ay u dalbadeen inuu ra’iisalwasaare Stefan Löfven shaqada ka cayriyo saddex wasiir inta aan la furin golaha baarlamaanka, wasiiradaas oo kale ahaa wasiirka kaabayaasha dhaqaalaha, wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka difaaca. Mararka qarna waxa ayba ku doodayeen in ra’iisalwasaaraha laftirkiisa mooshin ay keenaan.
Laba ka mid ah wasiiradii dowladda way iskaga baxeen xukumadda, kuwaas oo kala ahaa wasiiraddii kaabayaasha dhaqaalaha Anna Johansson iyo wasiirkii arrimaha gudaha Anders Ygeman ka gadaal markii uu soo kordhay cadaadiska la xiriira fadeexadii IT-ga.
Baarlamaanka Sweden ayaa shalay ka soo noqday fasaxii xagaaga yeeshayna kalfadhigii ugu horeeyey sannad howl-leedka cusub.
Welina waxaa halkiisa shaqadii wasiirnimo ka sii wata wasiirka difaaca Peter Hultqvist. Taas ayaana keentay in xisbiga Sverigedemokraterna uu hadda ka gudbiyo mooshin kalsooni kala noqosho.
Hoggaamiyaha xisbiga Jimmie Åkesson oo shalay laga waraysanayey barnaamijka Studio Ett ka baxa ee raadiyaha Sweden ayaa sida tan ka yiri mooshin kalsooni kala noqosho oo ay damacsan yahiin baarlamaanka in ay u gudbiyaan.
"Waa mid la xiriira fadeexadii IT-ga ee xagaagii, iyada oo ra’iisalwasaaraha fursad u haystay in uu xukumaddiisa isku shaan-dheeyo", balse sidaas ma sameynin, ayuu yiri Jimmie Åkesson hoggaamiayaha SD. Hadalkiisa waxa uu raaciyey in uusan rumaysanayn sharaxaadda madax-tooyada ka baxisay arrintan la xiriirta fadeexadii IT-ga. Balse uu rumaysan yahay inuu ra’iisalwasaaruhu horayula socday arrintan.